बाँकेका पहिलो संक्रमितसहित २१ जनाले कोरोना जिते, आजै घर फर्किदैं – Khabar Silo
बाँके जिल्लाका पहिलो संक्रमित ६० वर्षीय व्यक्तिसँगै २१ जना कोरोनाबाट निको भएका छन्।
बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २१ जनाको पुनः परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले डिस्चार्ज गर्न लागिएको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए।
‘उहाँ सबै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकै हुनुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने ‘ रि टेष्ट गर्दा उहाँहरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुँदा केही बेरमा घर पठाउने तयारी भइरहेको छ।’
स्रोतका अनुसार शुक्रबार डिस्चार्ज भएर घर जान लागेका मध्य नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ का एक पुरुषसहित र ८ का २० जना रहेका छन्।
फोकल पर्सन श्रेष्ठले निको भएर घर जान लागेकाहरु महिला समेत रहेको जानकारी दिएपनि कति जना? भन्ने खुलाउन चाहेनन्।
बाँकेमा पहिलोपटक वैशाख १९ गते ६० बर्षीय एक मस्जिदमा पढाउने शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि उनको सम्पर्कमा आएका एकै टोलका अन्य मानिसहरुमा समेत संक्रमण भेटिएको थियो।
२० दिन आइसोलेनमा बसेर निको भएर घर जान लागेकाहरु उनीहरु नै रहेको स्रोतले बताएको छ।
त्यसमध्ये नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं. ५ का २५ वर्षीय एक पुरुषको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भएको थियो।
बाँकेमा हालसम्म नरैनापुरका ७४, नेपालगन्जका २५ र खजुराका २ जना संक्रमित फेला परेका छन्।
संक्रमितहरुको खजुरा, नेपालगन्ज, कोहलपुर र दाङमा उपचार भइरहेको छ।
खजुरा अस्पतालमा ३८ जनाको उपचार भइरहेको छ।
त्यसमा बाँके ३७ र बर्दियाकी एक जना ११ वर्षीया बालिका रहेका छन्।
काठमाडौं, २६ फागुन । प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका १४ कलंकीबाट दुई महिला पाकेटमारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।महानगरीय प्रहरी प्रभाग कंलकीका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक मिठ्ठु खड्काकाे नेतृत्वको टाेलीले काठमाडौँ, गोंगबु-११ की २४ वर्षीया सम्झना परियार र सिन्धुपाल्चोक लिसंखु घर भई हाल काठमाडौँ मनमैजु बस्ने २३ वर्षीय सिर्जना उप्रेतीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । खड्काका अनुसार उनीहरूले विगत […]
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्न थालेपछि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने गरी गृह मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने गृहकार्य थालेको हो । जेठ मसान्तमा निषेधाज्ञा सकिएपछि जोर–विजोर लगाउनेबारे पनि छलफल भएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने तर निजीको हकमा […]
कोरोनाको नयाँ र खतरनाक लक्षण देखिएको भन्दै डब्लुएचओले दियो फेरी यस्तो डरलाग्दो चेतावनी, विश्वभर त्रास
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व त्रसित बनेको छ। कोरोनाभाइरसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले विभिन्न अध्ययन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकले कोरोना भाइरसको नयाँ र खतरनाक लक्षण देखिएको दाबी गरेका छन्। सुरुवातमा खोकी र ज्वरो मानिएको कोरोना भाइरसको लक्षण पछि विस्तारै फरक फरक स्वरुमा देखिन थालेको पाइएको छ। पछिल्लो समय विशेषज्ञहरुले कोरोनाभाइरसका संक्रमितलाई बोल्न पनि समस्या हुने […]
१२ जनामा आरडिटी पोजेटिभ देखिएपछि शङ्खरापुर सिल